Poolisoota Fedaralaa 11 kan Gondoriitti ajjeefaman keessaa 3 Oromoo ta’uun beekame. -
Poolisoota Fedaralaa 11 kan Gondoriitti ajjeefaman keessaa 3 Oromoo ta’uun beekame.
bilisummaa July 14, 2016	Leave a comment
OMN:Oduu Adol.13,2016 Lakkoofsi poolisoota federaalaa Gondarii fi naannawa sanitti ajjeefamanii 11 gahee jiraachuun isaanii himame.
Poolisota iddoo kanatti ajjeeffaman keessaa sadii dhalootaan ilmaan Oromoo tahuunis beekame jira.
Poolisonni ajjeefaman kunneenis konstable Ibsaa-Qeellam Wallaggaa, konstable Abdisaa-Jimmaa,fi sadaffaan immoo ammaaf maqaan isaa kan hin bekamin garuu dhaloonni isaa Wallagga Lixaa- magaalaa Gimbii tahuus ragaan iddoo kana irra arganne ni mul’isa.
Haalli nageenya naannoo magaalaa Gondor keessa jiruus haalaan ulfaata tahu isarra kan kahe jiraattoonni bahan galuuf yaaddoo fi dhiphina gurguddaa keessaa akka jiraniis beekame jira.
Previous Jibuutitti baqattoonni Oromoo 4 mana hidhaa keessatti du’an.
Next Ibsa waajjira Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (ULFO)
Hubataa Dubbii tiin Qabsoon Oromoo tooftaa hundatti dhimma bahuu qaba: Qabsoo nagaas, kan hidhannoos. ABOn …
Maraammartoo abbaa irrummaa sirnoota ItoophiyaaXiinxala gabaabaa